Nepali Rajneeti | हिन्दु राष्ट्र र राजसँस्था ल्याउने तयारी? यस्तो छ योजना ।
हिन्दु राष्ट्र र राजसँस्था ल्याउने तयारी? यस्तो छ योजना ।
चैत्र ४, २०७७ बुधबार ५६९ पटक हेरिएको
हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनः स्थापनको माग राखेर आन्दोलनरत संयुक्त राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनले जनप्रदर्शन र राष्ट्रिय झण्डा -याली गर्ने भएको छ ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समितिले २०४७ सालको संबिधान लागु गर्न माग गर्दै चैत्र ७ गते विहान साँढे ११ बजे माइतिघर मण्डलामा बिशाल जनप्रदर्शन र झण्डा -याली गर्ने जानकारी दिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक शेखरजंग रायमाझीले सबै नेपाली जनता राष्ट्रिय झण्डामा गोलबद्व हुन आवश्यक भएको भन्दै २०४७ सालको संविधान नै मुलुकको लागि हितकर भएको बताए ।
उनले अहिलेको संविधानले राष्ट्रिय आम्दानीले धान्न नसक्ने फजुल खर्च बढाउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । रायमाझीले नेपाली जनतालाई अत्यधिक करको चाप र भयानक बैदेशिक ऋणको भार थोपार्दै मुलुक असफलता तर्फ डोर्याएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै माछा–मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष रमेश खड्गीले गणतन्त्रमा लज्जास्पद गतिविधिहरु भएको टिप्प्णी गरे । उनले भने,‘गणतन्त्र लाजमर्दो भयो ।
अब हामी जनताले बुझ्नुपर्छ भन्दै टोल टोलबाट उठ्नु पर्छ, नत्र हाम्रो देशलाई बेचेर खान्छन् ।’ उनले अब सबै नेपाली एक ढिक्का भएर उठ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनकी निरा रञ्जितले देश संकटमा पुगिसकेको बताइन् । ‘धेरै मान्छे आयो गयो तर यहाँ शक्ति प्रदर्शन मात्र भइरहेको छ ।’
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रवादी र राजसंस्था जोगउनका निम्ती मैले विभिन्न संघसंस्थामा मान्छेहरु खोजिरहेको छु ।’ शक्तिशाली आन्दोलन कसैले गर्न नसकेको जिकीर गरिन् ।
संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनका सोमराम थापाले देश अन्यौलग्रस्त अवस्था रहेको बताए । उनले भने,‘कसैलाई पनि देश कता तिर गइरहेको विषय थाहाँ छैन ।
देशको भविष्य कता तिर गइरहेको विषय समेत थाहा नभएको अवस्था छ ।’ उनले संविधानलाई खारेज गरेर २०४७ को संविधानलाई ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । २०४७ को संविधान ल्याउन आन्दोलनको घोषणा गर्न लागेको बताए । आन्दोलन सत्ता लक्षित हुने बताए ।